Soosaaraha Adeegga Soo Saara ee Soo Saara Adeeg Bixiye Yahay iyo Soo-saare | Daabacaadda Aqoonta
Magaca badeecada: Adeegga daabacaadda xaashiyaha xaashiyaha lagu duubto oo caado ah
Cabbirka iyo nashqadeynta: la diyaarshay
Dhamaadka dusha kore: dusha sare matte ama dhameystir la'aan
Qiimaha qeybta: usd0.05-usd0.9
MOQ: 500pcs oo loogu talagalay dalabka caadiga ah
Uch ayaa laga sheegay sababta loo adeegsado suuq geynta waraaqaha. Waxay ka mid yihiin agabka suuqgeynta ugu waxtarka badan. Kaliya maahan inay qabsadaan dareenka suuqa bartilmaameedkaaga iyagoo leh aragti weyn, waxay sidoo kale leeyihiin qol badan oo ay ku sharxaan faahfaahinta alaabada iyo adeegyadooda.
Ma dhihi karno wax la mid ah oo ku saabsan sida dhabta ah ee loo isticmaalo buug-yare. Dabcan, waxaa jira qaabab badan oo madhan oo bilaash ah oo aad u adeegsan karto kor u qaadista. Si kastaba ha noqotee, qodobo kooban ayaa ka wada hadlaya laabista buug-yarahan iyo sida loo isticmaalo.
Muuqaal gaar ah oo buugyarahan ah ayaa leh in ay leedahay laab-badan. Si loo helo suuqgeyn wax ku ool ah, ogaanshaha goorta la adeegsanaayo buug-yarahan ayaa muhiim ah. Markaad gorfayso ka dib waxa ay ka kooban tahay sida ugu wanaagsan ee ugu habboon suuqyada bartilmaameedkaaga, waa in aad doorataa fayl-gacmeedka ku habboon ee ku habboon.
Daabacaadda daabacaadda Runner, waxaan ku bixinnaa dhowr laab oo aad ku dari karto qoraalkaaga yar. Caqabada kaliya ayaa ah doorashada. Waa kuwan noocyada kala duwan ee loo laabto buug yaraha iyo U isticmaalkooda ugu wanaagsan.
Habka ugu fudud ee loo duubo buug yar waa in loo laab laabaa. Fursadda laabmahan waxay ku sameyneysaa laba qaybood dhinac kasta, sida buug. Waxaad ugu adeegsan kartaa bandhigyo ganacsi oo sahlan oo aan lahayn bogag badan. Bog aqal aad u weyn ayaa fursad weyn u noqon kara ka qeyb qaadashada nashqadeynta aragga.
Boqolkiiba seddex boqolkiiba waa fursadda noogu caansan. Waxa kale oo loo yaqaanaa laab laab warqad, buug yarahan caanka ah wuxuu leeyahay saddex weji oo isleeg dhinac kasta. Midba midka kale wuxuu ku laalaabaa qeybihiisa kala duwan. Xirmooyinkaan waxaa badanaa loo isticmaalaa ololayaasha suuqgeynta si ay u sharxaan badeecadaha iyo adeegyada sababtoo ah naqshaddooda gaarka ah. Saddexdaan laablaab ee isla eg waa kuwo dareen leh, gaar ahaan isku xigxiga tillaabooyinka iyo liistooyinka tirooyinka leh.
Fadlan la soco inaanan iibinayn wax alaab ah. Waxaan bixinaa adeegyo daabacan waxaana u baahanahay feylasha loo yaqaan 'vector PDF files si aan u daabacno. Si loo bixiyo qiime sax ah, waxaan u baahan nahay inaan ogaano cabirkaaga buugga, tirada bogagga gudaha, midabka daboolka iyo gudaha, iwm.
Cabbirka aan sida caadiga ah u daabacno waa A4, A5, iwm.
Hore: Adeegga daabacaadda sanduuqa Buugga Macaamiisha ee Shiinaha
Xiga: Daabacaha Alarlar A2 Oo Daabacaad Lagu daabacay Shiinaha